Mayelana | MyCoolClass
Ukufunda okubonakalayo kuye kwanda kakhulu emhlabeni jikelele. Kwabaningi, kuyindlela entsha ejwayelekile yokufunda. Ku-MyCoolClass, uzothola uthisha ophelele ukukunikeza ulwazi lokufunda lomuntu siqu ukukusiza uphumelele ezinhlosweni zakho noma zobungcweti. IMyCoolClass inekilasi elipholile elenzelwe wena noma ngabe ufunda ulimi, udinga ukufundiswa esikoleni noma eyunivesithi, noma ufunda insimbi yomculo.
Kunamapulatifomu amaningi wokufunda ongakhetha kuwo. Okusenza sehluke ukuthi singabanikazi bothisha! Wonke uthisha oneMyCoolClass unesabelo enkampanini futhi usiza ukwenza izinqumo. Njengobambiswano, izinto eziseqhulwini kithi ukusiza umfundi futhi siqinisekise ukuthi bonke othisha bakhokhelwa ngendlela futhi baphathwa ngokulinganayo. Imodeli yethu yebhizinisi ngokwemvelo iheha othisha abahamba phambili emhlabeni wonke abazibophezele ekwakheni
ubudlelwane obuqinile nabafundi babo.
Ukuze ufunde kabanzi nge-MyCoolClass njengenhlangano yokubambisana, sicela sivakashele lapha.